Amazonite | Nay Zaw Lin Notes
Nay Zaw Lin Notes
by Nay Zaw LinPosted on March 8, 2020 July 6, 2020
ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ရုရှား၊ ကနေဒါ၊ ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ နမီးဘီးယား၊ သြစတြီးယား
Amazonite မှာ မကောင်း တဲ့ energy တွေကို filter လုပ် နိုင် တဲ့ စွမ်း အား ရှိ တယ်။ Mobile phone တွေနဲ့ Electronic device တွေက နေ ထုတ်လွှတ်လိုက် တဲ့လျှပ်စစ်သံလိုက် အား တွေ ကိုစုပ်ယူပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ ဦး နှောက်နှင့်အာရုံကြောစနစ်ကိုငြိမ်သက်စေတယ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနုပျိုစေပီး ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာရေးကိုအမြဲ ထိန်းသိမ်းပေး တယ်။ စိတ်ဒဏ်ရာများကိုသက်သာစေပြီးစိုးရိမ်မှုများ၊စိတ်လှုပ်ရှား မှု များနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများကိုလျော့ပါးစေတယ်။ အပျက်သဘောဆောင်သောစွမ်းအင်နှင့်အခြားဆိုးရွားမှုကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။ Spiritual အတွက် ဆိုရင် သတိနဲ့ သက်ဆိုင် တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အလွန် အကျိုး ရှိစေတယ်။ Universal love တွေကို manifesting လုပ်တဲ့ အချိန် တွေမှာ လဲ အရမ်း အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။
Amazonite ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမှုတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်နှလုံးနှင့်လည်ချောင်းဆိုင်ရာ Chakras များကိုဖွင့် ပေး ပီး ကုသပေးတယ်။ third eye နဲ့ ဝမ်းတွင်း စိတ် ခံစားမှုတွေကို လဲ တိုးတက်စေ တယ်။ အာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိမကောင်း တဲ့စွမ်းအင်နှင့်ပိတ်ဆို့မှုများကိုဖြိုခွဲပေးတယ်။ အရိုးပွရောဂါ၊ သွားပျက်စီးခြင်း၊ ကယ်လစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းအစ ရှိတဲ့ ရောဂါများအတွက်အကျိုးရှိတယ်။ အဓိက အကျိုး ရှိမှုမှာမိုက်ခရိုဝေ့လှိုင်းများနှင့်အခြားလျှပ်စစ်သံလိုက် များ ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓါတ် တွေ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ အထိနဲ အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်။
Mobile phone တွေက ထွက်တဲ့ radio waves တွေကို ကာကွယ် နိုင် ဖို့ အ တွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဝတ်ဆင်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျောက်တုံး အကြီး တွေကို computer နဲ့ TV အစရှိတဲ့ electronic device တွေ နား မှာထား နိုင် တယ်။
Ref: The Crystal Bible
Posted in Healing CrystalsTagged Amazonite, Healing Crystals
Published by Nay Zaw Lin
I amaseeker of knowledge and also coincidentallyaSoftware Engineer.	View all posts by Nay Zaw Lin
Prev How to create an Https server on Hapi.js?
Next How to connect the MSSQL server with Hapi.js?
How to set the request timeout in C# .NET Core?
How to use Redis Cache in .NET Core 3.1?
How to setapassword for Redis Server?
How to update all the NodeJS npm Packages to latest version together?
How to add DLL reference in C# Project with .NET Core 3.1?
© Copyright 2022 – Nay Zaw Lin Notes